एट ए साईड फुटबलको उपाधि टी बर्गर ललितपुरलाई - Kheladi News Kheladi News
एट ए साईड फुटबलको उपाधि टी बर्गर ललितपुरलाई
पोखरा(खेलाडी न्युज) –बगर भाईखलकको आयोजनामा भएको तेश्रो रन्जित गुरुङ स्मृती तथा नवौं बगर भाइखलक भेट्रान एट–ए–साइड अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि टी बर्गर ललितपुरले हात पारेको छ । शनिबार पोखरा १ टुडिखेल मैदानमा भएको फाईनल खेलमा गत वर्षको विजेता एविसि २–१ को गोलले पराजित गर्दै उपाधि उचाल्यो ।
टी बर्गरको तर्फबाट दुवै गोल टियाराम भुजेलले गरे । उनले पहिलो गोल १३ मिनेटमा र दोश्रो गोल २९ मिनेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ गरे । एबिसिका तर्फबाट दोश्रो हाफको शुरु भएलगत्तै ३३ मिनेटमा बिजय गुरुङले सान्त्वना गोल गरे । खेलमा म्यान अफ दि म्याचको उपाधि टि बर्गरका टियाराम भुजेलले पाए । टी बर्गरका नरेन्द्र लिम्बु प्रतियोगिताका उत्कृष्ट खेलाडी बन्न सफल भए । उत्कृष्ट गोलकिपर एबिसिका रबिन शाही, उत्कृष्ट डिफेन्डर एबिसिका विश्वलाल श्रेष्ठ, उत्कृष्ट फरवार्ड टी बर्गरका सुक्र तामाङ र उत्कृष्ट मिड फिल्डरको उपाधि टी बर्गरका टियाराम भुजेलले पाउन सफल भए ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले स्वास्थ्यका लागि खेलकुद आवश्यक रहेको बताए । खेलकुदद्वारा हुने आपसी सद्भावलाई कायम राखि अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । खेलप्रेमीलाई प्रतियोगितामा स्वागत गर्दै बगर भाइ खलकका अध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङले खलकले विगतदेखि गरेको गतिविधिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । साथै साथ र सहयोगका लागि सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त समेत अध्यक्ष गुरुङले गरेका थिए ।
‘स्वास्थका लागि एक घण्टा व्यायाम, नागरिकहरुका लागी नौलो आयाम’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात विगत २०६८ साल देखि ४० बर्ष देखि ६५ बर्षको उमेर समुहको भेट्रान फुटवल प्रतियोगीता आयोजना हुँदै आएको छ । प्रतियोगितामा विभिन्न ९ जिल्ला र भारत कलकत्ताका गरि २८ टिमको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगितामा उपाधी विजेताले नगद १ लाख ११ हजार र उपविजेताले ५५ हजार ५ सय ५५ का साथमा ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् ।
त्यसै गरी सेमीफाइनल प्रवेश गर्ने प्रत्येक टिमलाई नगद रु. १० हजार प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरेको प्रतियोगिताका प्राविधिक संयोजक खगेन्द्र गुरुङले बताए । त्यस्तै उत्कृष्ट गोलकिपर, उत्कृष्ट डिफेण्डर, उत्कृष्ट मिडफिल्डर र उत्कृष्ट फरवार्ड हुने खेलाडीलाई ट्रफी सहित जनही नगद रु. ५ हजार प्रदान गरियो । साथै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई ट्रफी सहित नगद रु. १० हजार दिईयो । त्यस्तै प्रतियोगितामा सहभागी सवै भन्दा जेष्ठ खेलाडी श्रृंखला भेट्रानका चिनबहादुर खत्रीलाई सम्मान समेत बगर भाइखलकले गरेको छ ।सम्मान तथा पुरस्कार वितरण मन्त्री किरण गुरुङ, प्रदेश सभासद् कृष्ण थापालगाएत विशिष्ट व्यक्तिले वितरण गरेका थिए । कार्यक्रमको संचालन याम गुरुङले गरेका थिए ।